Indonezia: nahatezitra ny olona ny fahafatesan’ilay mpiasa an-trano tany Arabia Saodita · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2011 13:23 GMT
Naneho ny heviny am-pahavitrihana ireo Indoneziana raha nahare fa notapahan-doha tany Arabia Saodita tamin'ny volana lasa teo i Ruyati, 54 taona, mpiasa mila ravinahitra teratany avy any Java andrefana. Voaheloka ho faty izy satria namono ny mpampiasa azy izay, araka ny filazany, dia nanararaotra azy.
Ankoatra ny sazy fanamelohana noraisin'ny fitondrana any Arabia Saodita dia noraran'i Indonezia ny fandefasana mpiasa hankany an-toerana mandra-pisian'ny fifanarahana vita sonia, izay hatao hiarovana ny zon'ireo mpila ravinahitra sy mpiasa handeha ho any.
Indreto ny santionany amin'ireo fanehoan-kevitra nataon'ny blaogera. Pipi manontany tena hoe nahoana ny ray aman-dreny no mamela ny zanany vavy handeha hiasa an-trano any amin'ny firenena hafa:
Fotoana fotsiny no andrasana dia hanontany ny olona hoe: “inona àry no tena ratsy vitan'ny lehilahy indoneziana no dia avela handeha any Arabia Saodita ny vehivavy?” Any amin'ny firenena izay tsy afaka miara-miasa ny lehilahy sy ny vehivavy, nefa alefantsika any ny vehivavintsika hiara-honina amin'ny lehilahy mpampiasa azy. Any amin'ny firenena izay hametrahana ny vehivavy ho eo amin'ny “toerany marina”, any ny vehivavintsika no entina amin'ny fomba tsy mendrika. Ankehitriny fantantsika izany dia inona àry no hataontsika?
Nalaza tampoka ity tweet ity raha nosivanina ny vaovao mikasika ny fanapahan-doha:
Ruyati notapahan-doha tamin'ny 18 jona.
Inona no hiraharahiana ny fivahinianana masina (Hajj) any amin'ny firenena izay tsy mampihatra afa-tsy ny fanasaziana tahaka ny biby?
Yuke tsy mitovy hevitra amin'izany hafatra izany:
Tsy manana zo hisafidy ny masina aho, ka tsy maintsy handeha ho any hanatanteraka fivahinianana masina. Ny fampifandraisana ny rafitra ara-panjakana sy ny fitsarana amin'ny fanaovana ankivy ny fivahinianana masina dia tahaka ny mampifandray ny tarehimarika sy ny ampondra. Aoka isika hitovy aminy, ho voamarina ny antony nanajanonan'ny amerikana ny fanaovana fivahinianana masina any McDonalds sy Starbucks, na ireo mpankahala jiosy tsy handray ny fanampiana omen'ny Microsoft Windows, satria mihevitra ny ankamaroan'ny olona fa jiosy i Gate ka aleony mividy fiara Mercedes Benz.
Multibrand maniry ny fanjakana indoneziana ho malina kokoa amin'ny fiarovana ny zon'ny mpiasa mpila ravinahitra:
Maniry aho fa manomboka izao, ho malina kokoa ny fitondrana indoneziana amin'ireo mpiray tanindrazana amintsika miasa any ivelany, amin'ny alalan'ny fanaovana sonia amin'ny fanjakana iasan'izy ireny mba hahatomombana kokoa ny fiarovana azy ireo, ary hahazoana antoka tsara ny amin'ny fahaizany sy ny fahazarany mialoha ny handefasana azy hila ravinahitra. Tena ilaina izany satria ireny mpiasa any ivelany ireny no anisan'ny mampiditra vola vahiny ho an'ny firenentsika.
Colson manankiana ny famaizana:
Ary tokony hifanaraka amin'ny zon'olombelona ny famaizana hampiharina.
Na izany na tsy izany dia fanjakana maharikoriko izy aloha, haifomba avy any an'efitra, mbola manambany vehivavy, tsy miraharaha ny vitsy an'isa ary rafi-pitsarana tsy misy indrafo sy efa nilaozan'ny toetr'andro.
Mendrika zavatra tsara noho izany ny mponina any amin'ity firenena ity – lohataona arabo ohatra.
Tokony hanameloka iny fanapahan-doha iny ny fanjakana mandroso rehetra ary hanao ankivy amin'i Arabia Saodita mandra-pihavaozany.
(Mampalahelo anefa fa hangina daholo izao ny rehetra : i Arabia Saodita no mifehy ny zavatra mampiaina ny kapitalista (solika) sy tsy maintsy ilain'ny fiainana ara-panahin'ny silamo…).﻿
Unspun manazava fa ny fialan-tsiny nataon'i Arabia Saodita dia tsy mahakasika ilay fanapahan-doha fa ny tsy nahafahan'izy ireo nampilaza mialoha tamin'ny fanjakana indoneziana momba ity fanapahan-doha hotanterahany ity:
Lohateny mamitaka: niala tsiny ny fanjakana any Arabia Saodita satria tsy nilaza mialoha ny amin'ny fanapahan-doha hotanterahiny, fa tsy hoe miala tsiny amin'ny fanapahan-doha an'ny fanapahan-dohan'ilay mpiasa vavy. Ny tena olana dia ilay fanapahan-doha, fa tsy ny fahamendrehan'ny diplaomasia.
Jack Lato diso fanantenana fa tsy nandray andraikitra mikendry ny hanatsarana ny mahaolona ireo mpila ravinahitra ny filoha:
Tanterahana ny FAMPANANTENANA. Izay no mahatonga ny hoe ny fampanantenana avy amin'ny fanjakana feodaly, tahaka an'i Indonezia, dia mampanahy ihany mandra-pahita ny mifanohitra amin'izany. Na izany aza, Indoneziana maro, indrindra ireo mpiasa mpila ravinahitra, izay tsy manana fiarovana mihitsy manoloana ny fahantrana tsy misy ihodivirana any amin'ny fitsarana, no mitomany eo am-pihainoana ny fampanantenana tsara lahatra nataon'ny filoha Susilo Bambang Yudhoyono.